Golaha Wasiirada oo la horgeeyay Miisaaniyadda Dowladda ee 2021 (SAWIRRO) – AfmoNews
Golaha Wasiirada oo la horgeeyay Miisaaniyadda Dowladda ee 2021 (SAWIRRO)
Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Somaliya ayaa waxaa maanta la horgeeyay Miisaaniyadda Dowladda ku shaqayn doonto sanadka ina soo aadan.
Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa Golaha Wasiirada horgeeyay Miisaaniyadda 2020/21, iyadoona uu kulanka shir guddoominayay Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar).
Xafiiska Warbaahinta ee Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble weli ma soo bandhigin cadadka Miisaaniyadda uu Qaranka ku hawlgeli doono sanadka ina soo aadan.
Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya ayaa 31-kii bishii December ee sanadkii hore ansixiyay Miisaaniyadda Dowladda ee sanadkan, oo cadadkeedu uu ahaa in ka badan afar boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar ($476, 151, 902), taasoo ay soo gudbisay Wasaaradda Maaliyadda.
Waxaa la qisaasayaa in Miisaaniyadda Qaranka ee sanadka ina soo aadan ay ka badnaan doonto midda sanadkan, marka aad eegto in dalka uu gelayo marxalad doorasho.
Waa kulankii ugu horeeyay uu Mahdi Maxamed Guuleed shir guddoomiyo Golaha Wasiirada cusub, tan iyo markii markale dib loogu soo magacaabay inuu noqdo Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka.